Knowledge Archives - CeleTrend
လအလိုက်ခရီးသွားသင့်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒေသများ
January 10, 2020 Celebrity 0
ဇန်နဝါရီလ ဇန်နဝါရီလမှာ ခရီးသွားသင့်တဲ့နေရာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မြောက်ဦးမြို့ပါပဲ။ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရှေးဟောင်း သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်လည်း အရေးပါတဲ့ နေရာတနေရာဖြစ်သလို ရှုမငြီးနိုင်တဲ့ စေတီပုထိုးတွေကိုလည်း ဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအချိန်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်တော့ လူကြိုက်များတဲ့နေရာမျိုးတွေကို မလည်ပတ်သင့်ဘဲ အစားအသောက်အလွန်ကောင်းတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက သီပေါနဲ့ ကျောက်မဲမြို့တွေကို ခရီးထွက်သင့်ပါတယ်။ ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ […]
အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းမှာသာရှိတဲ့ အလွန်လှပပြီး နှင်းဖုံးတဲ့ ရွာ
January 7, 2020 Celebrity 0
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဆောင်းတွင်းကာလဆို နှင်းခဲတွေ ဖုံးလွှမ်းပြီး အရမ်းလှတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးကို ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာ မြင်ဖူးမှာပါနော်… အဲလို နှင်းတွေဖြူဖွေးလှပနေတာမြင်ရရင် ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်း နှင်းတောထဲမှာ လျှောက်သွားချင်စိတ် ကစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ထင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်လေ…အရမ်းကို လှပပြီး နှင်းခဲလေးတွေကို ကောက်ကိုင် ပစ်ပေါက်ချင်ကြတယ်မဟုတ်လား…. မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အပူပိုင်းဒေသမှာပါတာကြောင့် ကိုရီးယားတို့လို […]
လူကြိုက်များပေမယ့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်းလို့ မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး
December 11, 2019 Celebrity 0
လူကြိုက်များပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်းလို့ မစားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး ခုခေတ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ တဖြည်းဖြည်းပေါများလာနေပါတယ်။ လူတော်တော်များများစားသုံးတတ်တဲ့ အသင့်စား အစားအစာတွေ၊ တခြားသော ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကြောင့် ကင်ဆာတွေ အဖြစ်များလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအစားအစာတွေကို စားသုံးခြင်းက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလို့ ရှောင်ဖယ်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် အသားကင်တွေ […]
ရေချိုးပျင်းတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ
ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါတွေ၊ အိမ်မှာပဲနေပြီး သွားစရာ ထွေထွေထူးထူး မရှိတဲ့အခါတွေမှာ လူတော်တော်များများက ရေမချိုးဘဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့အေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင် သုံးရက်လေးရက်လောက်ကို ရေမချိုးပဲ နေတတ်ကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တစ်ရက်ကနေ နှစ်ရက်အထိ ရေမချိုးဘဲနေရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး ရေချိုးပျင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ပြောပြလိုက်ပါဦးနော်။ […]
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမ သြဝါဒများ
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမ သြဝါဒများ ၁။ ငါသည် မုချသေရမည်၊ အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်။ ၂။ ရခဲလှတဲ့ လူ.ဘဝကို အလွဲသုံးစား အချိန်တွေ မဖြုန်းလိုက်ပါနဲ.။ ၃။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မွေးကတည်းက အသေဘက်ကို ပြေးနေတယ်။ ၄။ သက်တမ်းတိုတဲ့ ဘဝကလေးမှာ တရားအားမထုတ်ဘဲ အချောင်ခိုနေရင် အသေစောက […]
အရင်းနှီးဆုံးလူတွေရဲ့ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတာမခံရအောင် ဒီအရာတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားပါ…
December 9, 2019 Celebrity 0
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ခင်နေတဲ့သူတွေအပေါ် အလွန်အမင်းယုံကြည်တတ်ကြတဲ့စိတ်လေးရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ သူကတော့ ငါ့ကိုမကောင်းကြံမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူကတော့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်လေးပေါ့။ သဒ္ဒါလွန်တော့ ကျွန်ဖြစ်ဆိုသလို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အယုံလွန်ပြီး ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှဖွင့်မပြောပါနဲ့။ အတိတ်ကအမှားလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အတိတ်ကအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လျှောက်မပြောပြပါနဲ့။ ကျွန်မတို့ကယုံကြည်လို့ပြောတာဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ […]
မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားတော့မယ့် လက္ခဏာ ၇ ခု အကြောင်း(လူတိုင်းဖတ်သင့်ပါတယ်)
ကင်ဆာရောဂါများထဲက မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာဟာ အစောပိုင်းအခြေအနေမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြခဲလှတဲ့အတွက် အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့တောင် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပါတယ်။သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာချက်အရ မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားသူ 100မှာ 91% ရာခိုင်နှုန်းသော လူနာတွေဟာ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး 9%သာ အသက်ရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။အစောပိုင်းမှာ နာကျင်မှုမရှိဘူးဆိုပေမယ့် ကင်ဆာဖြစ်နေပြီလို့ သံသယဝင်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ အသားဝါရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အသားအရေဝါခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားဝါရောဂါဖြစ်လာပြီဆို […]
သင် နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား.!
December 8, 2019 Celebrity 0
သင် နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား. တစ်နေ့ ၁၀၀၀ စု . . ၅ နှစ်ပြည့်ရင် သင့်လက်ထဲမှာ ၁၈ သိန်းပိုင်ဆိုင်နေပြီး. . .၁၈သိန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းတစ်ခုခု ထောင်နိုင်ပြီတစ်နေ့ ၂၀၀၀ စု. […]
နေရင်းထိုင်ရင်း ရုတ်တရက်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ
December 5, 2019 Celebrity 0
ဒီအတိုင်း၊ ပုံမှန်အလုပ်တွေ လုပ်နေရင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူရှိနေရင်းက ရုတ်တရက် စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုး ဖြစ်ဖူးလား။ ဘာမှလည်း ထူးထူးခြားခြား မဖြစ်ရပါပဲနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတတ်တာလေ။ တစ်ခါတလေကျရင်တော့ အဲဒါဟာ ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် နေရင်းထိုင်ရင်း စိတ်ဓာတ်ကျ ကျ သွားတတ်တာဟာ တချို့လူတွေအတွက်တော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ပေါ့…..။ ပြီးခဲ့တဲ့ […]
အရေပြားဟာ စပါးလုံးတစ်ထောက်စာလောက်သာရှိ့တယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေပြောစကားအရကြားခဲ့ဖူးသလို။အသားမည်းတဲ့သူတွေဆိုလည်း လူတော်တော်များများကလှောင်ပြောင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသားရေမည်းနေရုံလောက်နဲ့တော့ ဘဝမှာစိတ်ပျက်အားငယ်စွာနဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းမသွားပါနဲ့။ အသားမည်းခြင်းမှာလည်းကောင်းကျိုး လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုပရိသတ်ကြီးသိအောင် ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်ခံရမှုမှသက်သာခြင်း ပုံမှန်အသားရေရှိတဲ့သူတစ်ယောက်သာ နေလောင်ခံရပြီဆိုရင်တော့ အသားရောင်ဟာ ခရမ်းချဉ်သီးရောင်လိုလို၊ မုန့်လာဥနီရောင်လိုလိုဖြစ်သွားကြရုံမကဘဲ တချို့ဆို အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေဆီမှာ ကုသမှုခံယူရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အသားမည်းတဲ့လူတွေကတော့ အဲဒီလိုဒဏ်တွေကနေ ဝေါင်ဝေါင်ရွှေး […]